Iwu Nzuzo |
Infinity Business Growth Network Ltd na-aghọta na nzuzo gị dị gị mkpa nakwa na ị na-eche banyere otu esi eji data onwe gị na nke ịkekọrịta n'ịntanetị. Anyị na-akwanyere ugwu nke onye ọ bụla bịara na weebụsaịtị a, franchiseek.com ("Anyị n'”wa") ma na-anakọta ma jiri data nkeonwe n'ụzọ ndị akọwara ebe a, yana n'ụzọ kwekọrọ na ọrụ anyị na ikike gị n'okpuru iwu.
Biko gụzie amụma nzuzo a nke ọma ma hụ na ị ghọtara ya. Echere na nnabata nke Iwu Nzuzo Anyị ga-apụta na ojiji mbụ nke saịtị anyị. A ga-achọ ka ị gụọ ma nabata Iwu Nzuzo a mgbe ị na-emejupụta kọntaktị ọ bụla, ndebanye aha na saịtị anyị. Ọ bụrụ na ịnabata ma kwenye na Iwu Nzuzo a, ị ga-akwụsị iji saịtị anyị ozugbo.
1. Nkọwapụta na Nkọwa
N'ime iwu a, usoro ndị a ga-enwe ihe ndị a:
“Akaụntụ” pụtara akaụntụ nke achọrọ iji banye na / ma ọ bụ iji ụfọdụ mpaghara na atụmatụ nke saịtị anyị;
"Kuki" pụtara obere faịlụ ederede etinye na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị site na saịtị anyị mgbe ị gara ụfọdụ akụkụ nke saịtị anyị na / ma ọ bụ mgbe ị na-eji ụfọdụ atụmatụ nke saịtị anyị. E depụtara nkọwa nke kuki anyị na saịtị anyị na ngalaba 13, n'okpuru;
Iwu "kuki" pụtara akụkụ dị mkpa nke Iwu Nzuzo na Nzuzo Kọmputa (EC Direction) 2003
"Data nkeonwe" pụtara na data niile metụtara onye ama ama nke enwere ike ịmata ya ozugbo. Na nke a, ọ pụtara data nke ị nyere anyị site na saịtị anyị. Nkọwa a ga-adị, ebe ọ dị, tinye na nkọwapụta enyere na Usoro Nchedo Data 1998 OR Iwu EU 2016/679 - Iwu nchekwa data nchekwa ("GDPR")
“Anyị / Anyị / Anyị” pụtara Infinity Business Growth Network Ltd, obere ụlọ ọrụ edebara aha na England n'okpuru nọmba ụlọ ọrụ 9073436, onye debara aha ya n'akwụkwọ bụ 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES, onye isi ahịa ya dịkwa ka nke a.
2. Ozi gbasara Anyị
Infinity Business Growth Network Ltd, bụ ụlọ ọrụ nwere ma na-arụ ọrụ ya, ụlọ ọrụ ole na ole edebanyere aha na England n'okpuru nọmba ụlọ ọrụ 9073436, onye debara aha ya bụ 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES nke adreesị ahịa ya bụ isi dị n'elu.
Nọmba VAT anyị bụ 252 9974 63.
Onye ọrụ nchekwa data anyị bụ Mr Joel Bissitt, enwere ike ịkpọtụrụ ya site na email na [Email na-echebe], site na ekwentị na 01323 332838, ma ọ bụ site na post na 2 Bromley Road, Seaford, East Sussex BN25 3ES.
3. Gịnị ka Iwu a na-ekpuchi?
Amụma nzuzo a na-emetụta naanị iji saịtị anyị. Saịtị anyị nwere ike ịnwe njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Biko rịba ama na anyị enweghị ike ịchịkwa otu esi anakọta data, chekwaa ma ọ bụ nke weebụsaịtị ndị ọzọ na-eji gị. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nyochaa iwu nzuzo nke weebụsaịtị dị otú ahụ tupu ịnye ha data ọ bụla.
4. Ikike gị
Dịka isiokwu data, ị nwere ikike ndị a n'okpuru GDPR, nke Iwu a yana Ojiji anyị gbasara data nkeonwe ahaziri
Ikike ịgwa gị gbasara nnakọta na ojiji nke data nkeonwe;
Ikike ịnweta data nkeonwe Anyị anyị gbasara gị (lee akụkụ 12);
Ikike idozi ma ọ bụrụ na data onwe anyị ọ bụla anyị jidere gbasara gị ezughị oke ma ọ bụ ezughị ezu (biko kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa ahụ na ngalaba 14);
Ikike ichezọ - ya bụ ikike ịgwa anyị ka anyị wepu data onwe anyị ọ bụla Anyị gbasara banyere gị (Anyị na-ejide data nkeonwe gị naanị obere oge, dị ka akọwara na ngalaba 6 mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị kpochapụ ya ngwa ngwa, biko. kpọtụrụ anyị site na iji nkọwapụta nkebi nke 14);
Ikike igbochi (ya bụ igbochi) nhazi nke onwe gị;
Ikike inweta ikike data (inweta otu nnomi nkeonwe gị ka ijigharị jiri ọrụ ma ọ bụ nzukọ ọzọ);
Ikike ịjụ data site na iji ebumnuche gị; na
Ikike dị na ya na mkpebi onwe akpaaka yana imebi aha gị
Ọ bụrụ na ịnwe ihe kpatara mkpesa gbasara anyị iji data nke gị, biko kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa ndị dị na ngalaba 14 ma Anyị ga-eme ike anyị iji dozie nsogbu ahụ maka gị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike inye aka, ị nwekwara ikike itinye akwụkwọ mkpesa na ndị isi nlekọta UK, Office Commissioner's Office.
Maka ama ndị ọzọ gbasara ikike gị, biko kpọtụrụ Commissionerlọ Ọrụ Commissionerlọ Ọrụ Ozi ma ọ bụ Adlọ Ndụmọdụ Ndụ Ọchịchị nke obodo gị.
5. Kedu data anyị na-anakọta?
Dabere na iji saịtị anyị, Anyị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ma ọ bụ niile nke data na nke na-abụghị nke onwe gị (biko leekwa akụkụ 13 na ojiji nke Cookies na teknụzụ ndị yiri ya:
aha azụmahịa / ụlọ ọrụ
ozi ịkpọtụrụ dịka adresị email na akara ekwentị;
ozi igwe mmadụ dika koodu nzipu ozi, ihe masịrị gi, na ihe ochicho gi;
ozi ego dị ka nọmba kaadị kredit / debit;
ụdị ihe nchọgharị weebụ na ụdị;
ndepụta nke URL ndị malitere na saịtị na-ezo aka, ọrụ gị na saịtị anyị, yana saịtị ị na-aga;
Nkọwa ọ bụla ọzọ ị họọrọ ịkesa
6. Olee otu anyị si eji data gị?
A na-ahazi data onwe onye ọ bụla na echekwa ya echedoro, maka na ọ baghị uru karịa n'ihi ebumnuche mbu. Anyị ga-agbaso n'ọrụ anyị ma chekwaa ikike gị n'okpuru Usoro Nchedo Data 1998 & GDPR n'oge niile. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nchekwa hụ ngalaba 7, n'okpuru.
Ojiji anyị gbasara ozi nkeonwe gị ga-enwe ndabere iwu kwadoro oge niile, ma ọ bụ na ọ dị mkpa maka ọrụ anyị nke nkwekọrịta, n'ihi na ị kwenyeere na ojiji nkeonwe gị (dịka ịdenye aha na ozi ịntanetị), ma ọ bụ n'ihi na ọ dị maka ọdịmma anyị. Kpọsị, Anyị nwere ike iji data gị maka ebumnuche ndị a:
Providnye na ijikwa akaụntụ gị na nyocha gụnyere ịnye nkọwa gị nye ndị mgbasa ozi dị mkpa na saịtị anyị
Inye ma jikwaa ị banye na saịtị anyị;
Alizinghazi ihe na ịhazi ahụmịhe gị na saịtị anyị;
Lyingnye ngwaahịa anyị NA / MAARA ọrụ gị (biko mara na anyị chọrọ data nke gị iji banye gị na nkwekọrịta);
Hazie ma hazie ngwaahịa anyị NA / MAARA maka gi
Nzaghachi ozi ịntanetị sitere n'aka gị;
Lying na-ebunye gị ozi ịntanetị abanyela na (ị nwere ike wepu aha ma ọ bụ pụọ na oge ọ bụla site na ịdebanye aha na saịtị anyị
Nyochaa iji saịtị anyị yana nzuko nzaghachi iji mee ka anyị nwee ike melite saịtị anyị na ahụmịhe njirimara gị;
Site n'ikike gị na / ma ọ bụ ebe iwu nyere, anyị nwekwara ike iji data gị maka ebumnuche ahịa nke ịgụnye ịkpọtụrụ gị site na email NA / MAARA ekwentị NA / MAARA Ederede ederede SMS na / MA tinye ozi na nnọchite nke ndị mgbasa ozi anyị, ozi na onyinye na ngwaahịa anyị NA / MAARA Na agbanyeghị, anyị agaghị ezitere gị ahịa ma ọ bụ spam a na-akọwaghị na anyị ga-eme ihe niile ezi uche dị na ya iji hụ na Anyị na-echekwa ikike gị n'ụzọ zuru oke ma rube isi n'iwu anyị n'okpuru Iwu Nchedo Data 1998 OR GDPR na Iwu Nzuzo na Nzuzo (EC Direction) Iwu 2003.
NA / MAARA
Ndị ọzọ nke ọdịnaya ha gosipụtara na saịtị anyị nwere ike iji kuki ndị ọzọ, dị ka akọwapụtara n'okpuru na ngalaba 13. Biko rụtụ aka na ngalaba 13 maka ozi ndị ọzọ na ijikwa kuki. Biko mara na anyị anaghị ejikwa ọrụ ndị ọzọ dị otú ahụ, ma ọ bụ data ha na-anakọta ma jiri ya na-adụ gị ọdụ ka ị lelee iwu nzuzo nke ndị ọzọ dị otú ahụ.
I nwere ikike iwepu nkwenye gi n’ebe anyi jiri data nke gi n’oge obula, ma juo ka anyi kpochapu ya.
Anyị anaghị edobe data nke gị karịa oge ọ bụla dị mkpa site na ebumnuche maka ebumnuche maka nke mbụ anakọtara ya. A ga - ejide data maka oge ndị a (ma ọ bụ na - ekpebi njide ya na ntọala ndị a):
Ruo mgbe wish chọrọ ị wepu aha site na weebụsaịtị anyị.
7. Kedu otu anyi si echekwa data gi?
Anyị na-echekwa data nke gị naanị oge anyị chọrọ iji ya dị ka akọwara n'elu na ngalaba 6, na / ma ọ bụ ruo oge niile anyị nwere ikike iji dobe ya.
Enwere ike idobe ụfọdụ ma ọ bụ data gị niile na mpụga mpaghara mpaghara European Economic (“EEA”) (EEA mejupụtara mba ndị otu EU, yana Norway, Iceland na Liechtenstein). E lere gị anya ịnabata ma kwenye nke a site na iji saịtị anyị na itinye ozi maka anyị. Ọ bụrụ na anyị echekwa data na mpụga EEA, Anyị ga-agbaso usoro ezi uche dị na ya iji hụ na ejiri data gị dị ka nchekwa yana echekwabara ka ọ dị n’ime UK yana n’okpuru Iwu Nchedo Data 1998 OR GDPR gụnyere:
Iji sava echedoro na uzo nzuzo ndi ozo n’enye webusaiti anyi na ndi nke ato.
Nchedo data dị anyị ezigbo mkpa, ma chekwaa data gị Anyị emeela ihe kwesịrị ekwesị iji chedo ma chekwaa data anakọtara site na saịtị anyị.
Nzọụkwụ anyị na-eme iji chekwaa ma chekwaa data gị gụnyere:
Iji sava echedoro na uzo nzuzo ndi ozo n’enye webusaiti anyi na ndi nke ato
8. Anyị Ekekọrịta data Gị?
Anyị nwere ike ịkekọrịta data gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ na Otu anyị maka ebumnuche ahịa. Nke a gụnyere ndị enyemaka anyị na ụlọ ọrụ anyị na-ejide ya na ndị enyemaka ya.
Anyị nwere ike ibute ndị ọzọ mgbe ụfọdụ ị nyere gị ngwaahịa na ọrụ maka gị n'aha anyị. Ndị a nwere ike ịgụnye nhazi ịkwụ ụgwọ, nnyefe ngwongwo, akụrụngwa ọchụchọ, mgbasa ozi na ahịa. N'ebe ụfọdụ, ndị ọzọ nwere ike ịchọ ịnweta ụfọdụ data gị niile. N'ebe ọ bụla achọrọ data gị maka ebumnuche dị otú ahụ, anyị ga-ewere ụzọ niile ezi uche dị na ya iji hụ na a ga-ejikwa data gị n'enweghị nsogbu ọ bụla, yana nchekwa yana ikike gị, ọrụ anyị, yana ọrụ ndị ọzọ n'okpuru iwu .
Anyị nwere ike chịkọta ọnụọgụ maka ojiji nke saịtị anyị gụnyere data nke okporo ụzọ, usoro ojiji, nọmba onye ọrụ, ahịa na ozi ndị ọzọ. Agaghị echedo data niile dị otú a, ọ gaghị agụnye data ọ bụla na-akọwapụta ya, ma ọ bụ data ọ bụla na-enweghị aha na enwere ike ijikọ ya na data ndị ọzọ ma jiri ya mata gị. Anyị nwere ike ịkekọrịta ndị ọzọ ụdị data ahụ site n'oge ruo n'oge dịka ndị na-atụ anya ịchụ ego, ndị mmekọ, na ndị mgbasa ozi. A ga-ekerịta data ma jiri ya rụọ ọrụ naanị n'iwu ahụ.
Anyị nwere ike mgbe ụfọdụ iji ndị ọzọ data processors nke dị na mpụga nke European Economic Mpaghara ("EEA") (EEA mejupụtara mba niile so na EU, yana Norway, Iceland na Liechtenstein). N'ebe anyị na-ebufe data nkeonwe ọ bụla na-abụghị EEA, Anyị ga-agbaso usoro ezi uche dị na ya iji hụ na ejiri data gị dị ka nchekwa yana echekwabara ka ọ ga-adị na UK na n'okpuru Iwu Nchedo Data 1998 OR GDPR
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike iwu ka anyị kesaa ụfọdụ data anyị na - ejide, nke nwere ike ịgụnye data nke gị, dịka ọmụmaatụ, ebe anyị na-etinye aka na usoro iwu, ebe anyị na-agbaso ihe iwu chọrọ, iwu ụlọ ikpe, ma ọ bụ nke gọọmentị. ikike.
9. Kedụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na azụmaahịa anyị agbanwee aka?
Anyị nwere ike, site n'oge ruo n'oge, gbasaa ma ọ bụ belata azụmahịa anyị na nke a nwere ike ịgụnye ire na / ma ọ bụ nnyefe nke nchịkwa nke ma ọ bụ akụkụ nke azụmahịa anyị. A ga-enyefe data nke ọ bụla ị nyegoro, ebe ọ dị mkpa maka akụkụ ọ bụla nke azụmahịa anyị a na-ebufe, aga-ebufe ya na akụkụ ahụ yana onye nwe ọhụrụ ma ọ bụ ndị na-achịkwa ọhụụ ga-ekwe, n'okpuru usoro nke Iwu Nzuzo a. iji data ahụ naanị maka otu nzube nke anyị si wepụta ya mbụ.
N'ihe banyere na aga-ebufe data gị ọ bụla n'ụzọ dị otú a, a gaghị akpọtụrụ gị ma gwa gị banyere mgbanwe ndị ahụ. Agbanyeghị, a ga-enye nhọrọ nhọrọ ka onye nwe ọhụụ ma ọ bụ onye njikwa kpochapụ data gị.
10. Kedụ Ka You Nwere Ike Njikwa Data Gị?
Na mgbakwunye ikike gị n'okpuru GDPR, nke edepụtara na ngalaba 4, mgbe ị nyefere data onwe gị site na saịtị anyị, enwere ike ịnye gị nhọrọ iji machibido ojiji nke data gị. Karịsịa, anyị na-achọ inye gị njikwa siri ike na ojiji nke data gị maka ebumnuche ahịa gị (gụnyere ikike ịpụ na ịnweta ozi ịntanetị sitere n'aka anyị nke ị nwere ike ịme site na ịdebanye aha na iji njikọ ndị enyere na ozi ịntanetị anyị na isi nke inye nkọwa gị
Inwere ike ịbanye otu ma ọ bụ karịa ọrụ mmasị na-arụ ọrụ n'ime UK: Ọrụ Mmasị Ekwentị ("TPS"), Ọrụ Maka phonelọ Ọrụ Ekele Maka (lọ Ọrụ ("CTPS"), na Ọrụ Mmasị Nzipu (" na MPS ”). Ndị a nwere ike inye aka igbochi ị nweta ahịa a na-achọghị. Biko mara na ọrụ ndị a agaghị egbochi gị ịnweta nkwukọrịta ahịa nke ị kwadoro ịnata.
11. Ikike Idobe Ozi
Nwere ike ị nweta ụfọdụ mpaghara nke saịtị anyị na-enweghị ịnye data ọ bụla na ewepu kuki. Agbanyeghị, iji njirimara na ọrụ niile dị na saịtị anyị enwere ike ịchọrọ nyefere ma ọ bụ nye ohere maka nchịkọta nke ụfọdụ data.
12. Olee otu ị ga - esi nweta data gị?
I nwere ikike ịrịọ maka otu nke data onwe gị nke anyị jidere n'okpuru GDPR, a na-akwụ £gwọ 10 $ na Anyị ga-enye ozi na ozi niile maka azịza gị n'ime ụbọchị iri anọ. Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ na [Email na-echebe] ma ọ bụ jiri nkọwa kọntaktị dị n'okpuru nkebi nke 14. N'aka nke ọzọ, biko rụtụ aka na Iwu Nchedo Data Anyị ebe a
13. Ojiji Kuki anyị
Saịtị anyị na-eji kuki iji nye ahụmịhe kachasị mma maka nleta gị. Iji lelee nkọwa nke iwu kuki anyị biko gaa na franchiseek.com/cookie-policy
14. ingkpọtụrụ Anyị
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara saịtị anyị ma ọ bụ amụma nzuzo a, biko kpọtụrụ anyị site na email na [Email na-echebe], site na ekwentị na +44 1323 332838, ma ọ bụ site na post na 2 Bromley Rd, Seaford, East Sussex, BN25 3ES. Biko hụ na ajụjụ gị doro anya, karịchaa ma ọ bụrụ na ọ bụ arịrịọ maka ozi gbasara data anyị na-ejide gị (dịka n’okpuru ngalaba 12, n’elu).
15. Mgbanwe na Iwu Nzuzo Anyị
Anyị nwere ike ịgbanwe Iwu nzuzo a site n'oge ruo n'oge (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iwu gbanwere). A ga-edenye mgbanwe ọ bụla na saịtị anyị ozugbo, ị ga-ahụkwa na ịnakwere usoro nke Iwu Nzuzo na ojiji mbụ nke saịtị anyị na-esochi mgbanwe ndị ahụ. Anyị na-akwado gị ka ị na-elele ibe a mgbe niile iji na-emechi anya.